Imbali yePunk Ebangela i-albhamu yokuqala yeBeastie Boys, 'Ilayisensi yokugula' | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Imbali yePunk emva kweBeastie Boys 'yeAlbham yokuqala,' Ilayisensi yokugula '
Amakhwenkwe eBeastie.Isikrini / i-YouTube
Ilayisenisi yokugula, ileta enkulu yelebheli ukusuka kwindawo yokuqhekeza i-rap yaseNew York e-Beastie Boys, ijika i-30 ngoLwesibini, nge-15 kaNovemba.
Ayisiyiyo eyona trio ibalaseleyo kwelicwecwe nokuba kukudubula okude, ngokuchaseneyo okunene. Ayizizo ezimbi zabo, nazo. Lo mbeko uya ku-2004 KwiiNqila ezi-5, ukubuyela umva ngendlela elahlekisayo ukuya ku-1986, eyathi yawa ngobuqili ngokunika onke amatsiba kunye nemida uAdam Horovitz, uMike Diamond kunye nowokugqibela, uAdam Yauch omkhulu owayenze kwimisebenzi elandelayo njenge Paul's Boutique, Jonga iNtloko yakho, uNxibelelwano olugulayo kwaye Molo Nasty.
Ukukhawuleza kwexesha ababebuyela ngalo, xa i-B-Boys iqala ukunxibelelana noRick Rubin kwaye baphinda badibanisa iisampulu zexesha leSikolo sikaD Gucci kunye neLust Zeppelin's Custard Pie ukuze bakwazi ukwenza isingqisho malunga nemipu, amantombazana kunye nokuhamba, kuchaphazele ulutsha lwaseMelika njenge-Boeing 727 etshayisa ecaleni lentaba.
Impembelelo yeBeastie Boys kwinkcubeko yethu i-surreal ngakumbi xa ucinga ukuba baqale phi: indawo enzima yaseNew York. Kwaye utyhafile ngakumbi xa ukhumbula ukuba ngo-1987 ungavula Umgangatho waseMelika NgoMgqibelo emva kwemini kwaye ufumane ii-Beasties zisoyikisa okuqhelekileyo kubaphulaphuli besitudiyo ngokuvumelanisa imilebe yempumelelo yabo (You Gotta) Lwela Ilungelo Lakho (Ukuya Kumthendeleko!) kunye ne-riff engathandabuzekiyo evela kuSlayer's Kerry King, ingoma egqithileyo itshathi yeBillboard kwiNombolo 7. Emva koko benza imbali xa Ndiyagula yaba yicwecwe lokuqala lehip-hop ukufikelela kwiNombolo 1 kwiitshathi, apho lahlala khona iiveki ezisixhenxe.
Kwakuyimpikiswano yenkcubeko ethathe ixesha ethathe umhlaba owaphulwe nguBlondie ngoXwilo kunye namaqabane atyelelayo aqhuba ii-DMC zikaEddie Martinez ezifudumeza i-heater njengeRock Box kunye neKing of Rock (singasathethi ke nge-crossover ka-1986 yabo egubungela iAerosmith's Walk This Way) kunye uyicole yangumgubo ocoliweyo. Yayisisandi solutsha olungaphantsi komhlaba eManhattan olwaluhlala kwiindawo zokuntywila ezinje nge-A7 kunye ne-CBGB emva kokuba iipunks zonke ziye eHollywood zibeka ibango labo kwi-Top 40 yaseMelika.
Kwaye abazilibalanga iingcambu zabo nje ukuba babethe ixesha elikhulu nokuba-zii-Beasties zabiza umthetho kaMurphy ukuba ubavulele xa beqala ukhenketho lwabo lokuqala lokuqaqambisa inkxaso Ilayisenisi yokugula.
Yinto emangazayo ebubungqina obukhoyo njenge-wormhole engaqhelekanga ngaphakathi kwexesha elingaphezulu kwexesha likaReagan elalisoloko licela umbuzo wokuba yintoni abazalwana babo abakwimeko ye-NYHC ababecinga ngayo ngenguqu ye-trio ukusuka kwi-hardcore ukuya kwi-hip-hop ngelixa bezisa la mawele akude ee-80s umculo ongaphantsi komhlaba usondelelene njengamaqabane obuchule kunye naweshishini. (Umzekelo, Umthetho kaMurphy kunye noovulindlela bentsimbi I-Cro-Mags bobabini batyikitywa kwiiRekhodi eziProfayili, nabo bakhupha ii-albhamu yi-Run DMC, Dana Dane kunye ne-Poor Righteous Teachers ngelo xesha.)
Ukuhlonipha iminyaka engama-30, uMbonisi kutshanje uthethe noJimmy Gestapo kunye noDoug E. Iimbotyi ezivela kwiQueens hardcore band Umthetho kaMurphy , ICro-Mags U-bassist u-Harley Flanagan kunye nomhlobo wexesha elide we-Beasties kunye nenkuthazo, u-bassist u-Darryl Jenifer we-DC ii-icons ezinzima Iingqondo ezimbi , malunga nale mibuzo kwimeko ye Ilayisenisi yokugula , kunye nendima yayo kwindaleko yenkcubeko yolutsha ngaphaya kweetshathi kunye neMTV.
UDarryl Jenifer , Iingqondo ezimbi
I-Hip-hop yayiqala ngokwenene ukutsiba nge-82 okanye '83. Ndiyakhumbula xa yayiyinto eyayibetha idolophu ephezulu, emva koko kwafika nje edolophini njengento entsha, ehlala isenzeka. Ingaba ngumdaniso omtsha, kodwa ngeli xesha kwakuvakala isandi esitsha. Ke uMike [iDayimane] kunye nabo, babengabantwana abanzima kodwa befumanisa into entsha kwaye bathatha i-hip-hop kwangoko. Ndicinga ukuba babezama ukuhlekisa ngayo kuqala, kuba yayingeyiyo eyona nto yabo.
Babezizidenge zelitye ikakhulu; ubuncinci uMike D no [Adam] Yauch. I-Ad Rock yayiyinkwenkwana lonke ixesha. Uyabona, bendihlala ndimbiza ngokuba nyana wam besebancinci kakhulu, ngathi uneminyaka eli-15. Wayehlala ene-b-boy persona, nditsho nasemva koko. U-Yauch wayelidwala kwaye uMike D wayefana nale pimp / rock dude eyayixhonywe kunye namantombazana amaninzi, abanye babo baya kuba nguLuscious Jackson.
Kwaye ke ndiyakuba yirasta esencinci, kwaye ke kukho uTania [Aebi], owayeyintombi yam encinci. Nguye owahamba ngeenqanawa kwihlabathi liphela . Sonke sasidla ngokuxhoma kwiRage Cage. Ndingathanda ukuxhonywa, ndisitya iicashews kunye nokutshaya ukhula. Wonke umntu uya kujinga nje ngaphandle, njengokuxhoma into-eluxholweni.
UEddie waseLeeway wayefana no-b-boy elulwalweni. UJimmy Gestapo wayeyinkwenkwana elityeni ngokunjalo. Wayengomnye wee-MC ezingekho mthethweni ngelo xesha, kodwa wayekwiqela elinzima. Qhuba iirekhodi ze-DMC zide zinee-guitars zamatye kuzo ngelo xesha. Yayinqumla kuwo onke ama-engile. Kwaye emva koko sakhahlela kunye neqela laseBrooklyn emva kokuba uYauch ephumile endleleni, kwaye sasiloluhlobo ngaphambi kwexesha lethu xa sasikhaba into enjalo.
Umculo waseBrooklyn wawuluhlobo oluthile lwerock yaseMelika 'n' roll. Kwakungekho i-punk kwaye kwakungekho nzima, kwaye kwakukho ngexesha ngaphambi kokuba abantu baqale ukucinga ukuba kupholile ukuba neengcambu ezininzi kunye nelitye lakho, bembethe iikhati ze-plaid kunye ne-shit enjalo. Ipolitiki yehip-hop kunye nento uYauch nabo ababehamba ngayo xa bevuthela, lonke uhambo lwenze umntu wam uAdam wanqwenela ukuphola kancinci kwaye adlale ikaka awayeqhele ukuyazi. Iminyaka, uYauch ebengazukuphinda athethe ngale rekhodi nam, kunzima. Yinto awayefuna ukuyenza awayecinga ukuba ngelo xesha kwakuvakala kuyinto engekho. Andiqinisekanga ukuba wayeqinisekile kwizwi lakhe, kodwa ndicinga ukuba kuvakala kulungile, ndoda.
Ezinye zeenkumbulo zam ezilungileyo zobuntwana zixhomekeke kuAdam Yauch noJohn Berry, owayesenabo ngelo xesha. Babengabahlobo bam abasenyongweni. Ukuqala kwam ukutya i-asidi kwaba bantu. Ndiyathetha, senze izinto ezininzi ezingenangqondo kunye neesile kunye sikhula. Ndiyakwazi ukukuxelela ubusuku obuninzi kangaka ulele kwindlu kaJohn okanye kwindlu ka-Adam kwaye uhleka nje de isisu sakho sibuhlungu malunga nolutsha olufikisayo.
Abo bafana babelungile, ndoda. Bavela kwimvelaphi encinci kum; Bendingumntana ose-Lower East Side kwaye besikude kulonto. Kodwa baxhoma ubumelwane bam, kuba kulapho yonke into ibisenzeka khona kwi-Lower East Side. Kulapho umculo wawuphila khona; kulapho ubomi babupompa khona, ke beza kwindawo yam yokuxhoma.
Ndadibana nabo kuba babengabalandeli beqela lam lakudala iThe Stimulators kwaye babedla ngokuphuma ukuza kusibona sidlala. Bandixelele, kwaye ndiyayichaza kwincwadi yam, ukuba uJohn Berry ucatshulwe esithi ndiyabakhuthaza kakhulu ukuba baqale ukudlala emaqeleni, kuba babefana, 'Fuck, ndoda, mncinci kuHarley kunathi kwaye ulapha ngaphandle rockin '. Masenze oku, yintoni esinqandayo? Uneminyaka eli-11, sino-13, 14, 15. Ukuba angayenza, masiyenze le ikaka, yintoni le ingaka? '
Into eyenziwa nguRick Rubin neBeastie Boys itshintshe imbali yomculo.-Harley Flanagan, Cro-Mags
Abo bafana babenyanzela abantu abalungileyo, kwaye kule minyaka idlulileyo bendizokubona iBeastie Boys idlala kwiikonsathi ezinkulu ezahlukileyo kwaye ndihlala ndiqinisekisa ukuba ndikuluhlu lweendwendwe kwaye bendisoloko ndikhwaza eqongeni. Ndikhumbula kakhulu uAdam noJohn.
Yintoni eyenziwa nguRick Rubin neBeastie Boys etshintshe imbali yomculo. Ukunyaniseka, emva phaya ndandingenguye umlandeli omkhulu wesampulu yomculo. Uluvo lwam lutshintshile kancinci ukusukela ngoko, ngoku ndiyakuxabisa ukusebenzisa iisampulu kunye nengqondo yoyilo ethathayo ukuva into kwaye ucinge, 'Owu, le ingayinto entle ukuphola.' Kodwa kwiintsuku zokuqala bendicinga ukuba bubusela. . Khange ndibuxabise kakhulu ubugcisa bayo nayo yonke loo nto ibitheni ngelo xesha.
ISabatha, umzekelo, yayinempembelelo enkulu kum, ngakumbi kwiintsuku zeCro-Mags kwaye ndicinga ukuba yile nto yasenza sahlukana namanye amaqela e-hardcore aseNew York kungenxa yokuba sasineempembelelo ezininzi ngaphandle kwehardcore. Iibhanti ezimamele kuphela i-hardcore, ndicinga ukuba uninzi lwazo luyanya kuba emva kwethutyana bekufana nokuba uyithatha phi impembelelo yakho? Kufana ne-shit efanayo ngokuphindaphindiweyo nokuphindaphindiweyo. Kwaye ndicinga ukuba sesona sizathu sokuba iBeastie Boys yenze impembelelo kumntu wonke kungenxa yokuba baqala ukuzoba iimpembelelo ezingaphandle kwesangqa sabo. Bahamba ngaphaya kwayo.
UJimmy Gestapo, Umthetho kaMurphy
Wonke umntu ubalekile ekhaya kwaye wayonzakalisa kwicala elisezantsi eMpuma kwaye sonke saxhoma kwindawo ebizwa ngokuba yiA7. Kulapho imiboniso yaqala khona, kodwa ndadibana neBeastie Boys eMax's Kansas City emva xa babebancinci kunye nabangenamsebenzi, kwaye saba ngabahlobo abalungileyo. Ndicula kwi-intshi encinci kunye neNgenamsebenzi, kwingoma ethi 'Vuka Ukhanye'. Besixhome ngalo lonke ixesha kwi-A7, nangona kunjalo, kwaye uJack Rabid wayeza kuba ngu-DJ'ing kwaye sonke sasihlala sijikeleze sithethe ngomculo, ngakumbi uninzi lwezinto ezaziphuma eNgilane, emva xa yayiseyipunk , Phambi kobunzima obunzima.
Izinto ezinje ngeRezillos kunye nePistols zoSini. Sonke sasineminyaka eli-14, eli-15 ubudala. Yile ndlela konke okwenzeka ngayo. Sahlala noAdam kunye naba bafana xa beqala ukuphuma emva kokuba bexhume noRick Rubin, owayemkhulu kwindawo yesehlo ngelixa esiya ekholejini. Wadlala kwiqela elibizwa ngokuba yiPricks kwaye babedlala iMax kunye nezinto, nazo. Kwaye ke yaqala ukuvela. Kwakukho abantwana abaninzi kwindawo endihlala kuyo, betshaya ukhula kwaye bemamele i-rap, hayi le nto banayo ngoku, ngakumbi njenge-D yesikolo D kunye ne-shit enjalo.
Izinto ezinobuntu obunobuchule kunye neetalente kwaye zinomyalezo kubo, hayi nje abafana abaqhayisa ngento abanayo okanye abanxibe ngayo. Konke kwakukutsha kuthi, olu luhlu lomculo lwaluqhubeka kwiindawo ezijikeleze ihip-hop. Kwaye akukho namnye kuthi owayecinga ukuba siza kuya ndawo; wonke umntu wayezonwabisa nje kwaye kwakungekho mbonakalo yokwenza umculo njengokuhamba wenze imali okanye ukhenketho kwihlabathi. Sasisenza nje oko sasikwenza ngelo xesha, kwaye kwakukuhle kakhulu. Ndonwabile ngokwenene ukuba ndiyinxalenye yalo.
Ungandifumana kwividiyo ethi 'Lwela Ilungelo Lakho'. Ndiphakathi egumbini xa wonke umntu edanisa ejikeleze kwaye ndanxiba ihempe yam yoMthetho kaMurphy. Intombi yam endala uNatalie ikulo, wayengomnye wamantombazana atsalela i-nerd kwigumbi elingasemva. Umdlali wam wegita uqhekeza ikeyiki komnye wabafana. Ibhendi yonke yayilapho. Senza zombini iintsuku zokudubula kwaye sahlala ngaphandle ubusuku bonke. Yayifotwa kwigumbi lomntu othile eloft, eyayintle kakhulu indlela ezenziwa ngayo iividiyo ngelo xesha.
URic Menello, ozenzele zonke iividiyo zakhe Ilayisenisi yokugula, simeme sonke apho. Ngapha koko xa uRick Rubin kunye noRussell Simmons beqala iDef Jam, basimemele kuyo yonke imiboniso yehip-hop, ethi incede ekuvaleni umsantsa ophakathi kwehardcore kunye nehip-hop. Babefunda isikolo esidala malunga nayo, kwaye yayiyinto entle leyo.
UDoug E. Iimbotyi, Umthetho kaMurphy
UAdam Yauch waqala IBrooklyn nam, uDarryl Jenifer kunye [nabahlobo beBeasties] uTom Cushman kuba ebefuna ikhefu. Wayefuna ukubuyela ekudlaleni umculo. Ndiyathetha, konke awakwenzayo wayedlwengula xa wayekhenketho Ilayisenisi yokugula. Babevele bavele eqongeni benze izinto zabo kwi-mic. Kodwa ndicinga ukuba nayo yamenza wafuna ukubuyela kumculo kwaye wayenezinto ezininzi ezibhaliweyo, ke wandikhuphela kunye noDarryl ngento awayeyenza noTom.
Sibe nexesha elimnandi lokurekhoda ezo seshoni, kwaye iinyawo zikaYauch ziyilwayo kuyo yonke into. Wahlawula mna noDarryl ukuba size ezantsi edolophini, kuba sobabini sasihlala phezulu phaya. Kwakuyiinyanga ezimbalwa ezinomdla. Siza kuziqhelanisa neBrooklyn emva koko ndiye eQueens kwaye uDarryl aye kwilali ukurekhoda ngeeBrains emva koko sidibane kwibhasi ye-11: 30 ukubuyela eNew Paltz naseWoodstock njengokuthi, 'Siza kubonana iintsuku! '[Ehleka]
Kum, ukudibana noDarryl Jenifer kwakumangalisa. Ukuqala kwam ukudlala nabo bendingazi ukuba ngubani ozayo, ndicinga nje ukuba izakuba ndim, uYauch noTom Cushman. Kwaye emva koko uDarryl ungena ehamba, kwaye bendifana, 'Ngcwele crap!' Xa ndishiya ukhenketho, uAdam Yauch wayefana nokuthi, 'Heyi ndoda uyafuna ukudibana ngelinye ixesha?' Kwaye bendifana, 'Ngokuqinisekileyo nantsi inombolo yam' ndicinga ukuba ngekhe aphinde anditsalele umnxeba. Kodwa ngenye imini umama unje, ‘uAdam Yauch usemnxebeni!’ Kwaye undixelela ukuba ndidibane naye kule studio edolophini.
Ndiqhelile ukudlala kwezi studio zinkulu nge-10th Ave kunye ne-shitholes ezincinci nezinto ezinjalo. Kwezi seshoni bendihamba ndingena endlwini, kwaye bendingazi ukuba ndikwindawo elungileyo na. Ndiye ndaya edesikeni engaphambili ndathi, 'Adam Yauch,' kwaye bebefana, 'Ewe, Igumbi D.' Ndingena kwaye liqonga le-freakin 'kwaye iimonitha kwaye zonke iimakrofoni zazimisiwe kwaye kukho iisofa . Kwakumangalisa kwaye ndandinethamsanqa lokuba yinxalenye yayo. Ndiyathemba ukuba ezo seshoni ziya kuphuma ngenye imini.
Ndiqale ukusebenza kwindawo yokutyela ebendinayo eNew Paltz kule minyaka ingama-23 idlulileyo ndakubuya Ilayisenisi yokugula ukhenketho. Sabuya endleleni kwaye ngokoqobo emva kweveki Umthetho kaMurphy wabuyela kukhenketho ezantsi eMzantsi, kwaye xa ndibuya andinamali, ke bendidinga ukwenza imali. Asenzanga lukhulu kutyelelo lweeBeasties nokuba. Kwakuyiholide ehlawulwayo, ngokwenene. Iirandi ezilishumi ngosuku kwisidlo ngasinye kwaye emva koko sayifumana imali kwintengiso kodwa yayiyiyo leyo. Sasingavuli kangako. Kodwa yayilixesha elimangalisayo.
Yayingathi kunye neFishbone esasibavulela, emva koko yaba lutshaba lukaRhulumente. Ndicinga ukuba ingcinga engasemva kwayo yayikukuba yayikhenketho lwekholeji, kwaye inyanga yokuqala yayiphantse ibe zonke iikholeji kunye neeklabhu zeesile ezincinci. Ndiyathetha, sidlale njengeLitye eSan Francisco kwaye lalithengisa ngokukhawuleza. Singahlala ubusuku obubini eLitye kwaye emva koko besenza obunye ubusuku eSeattle. Siye saqala eMontana, kwaye kwafika kwinqanaba lokuba ngexesha esisebenza ngalo ukuya eHollywood, kwavele kwaqhuma, yonke loo nto. Yayiphambene.
Ndijoyine umthetho ka-Murphy ngo-Disemba ka-86, kwaye kanye kwi-bat babenjengaye, 'Ngaba uyafuna ukuphuma endleleni kunye neli qela leBeastie Boys?' Kwaye bendifana nokuthi, 'Ngubani?' uhlobo lokuva kwabo ngesangqa se-punk, kodwa zange ndibabone. Ke sidlale imiboniso emibini nabo eNew York; enye kwiRitz, eyayiyigig ikakhulu yokurekhoda abantu belebheli abavela kwi-Def Jam. Kodwa emva koko sidlale iKholeji yoLuntu yaseNassau, kwaye i-Run DMC yaphuma kwaye yayintle kakhulu.
Ke xa sibhabha saphuma saya eNtshona, kulapho uFishbone wajoyina ukhenketho kwaye sathi sakubuya saphuma eMpuma, iSitha sikaRhulumente sangenela ukhenketho. Yayiphambene leyo. Ndiyabukhumbula ubusuku bokuqala bebenza yonke into yamandla amnyama, kwaye uLyor Cohen wawaqhekeza isitya esitsha sasemva kwigumbi lokunxiba. Sonke sasimile apho kwaye wayefana, 'Kufuneka udlalele abantwana ukuba ufuna ukwenza imali.' Kwaye ngobusuku obulandelayo bayilahla. Badlala umdlalo, ndoda. Kwakunyanzelekile ukuba; yayisisihlwele sabantu abamhlophe ubukhulu becala kwaye u-Def Jam wayenovalo lokuba babebacaphukisa abantu.
Ungahlala ePippa Middleton's Imbali yeScotland yaseScotland nge-Cool $ 17,000 ngobusuku
Indlela uMcebisi omnye aQinisa ngayo uBernie Sanders 'uMgaqo-nkqubo wezangaphandle e-2020
KwiMemoriam: 'Iinyawo Ezintandathu Phantsi' kweCast Eulogizes HBO's Late, Isikhumbuzo Esikhulu sokuPhila
Guardian Uhlasela i-Sweeney-Led State yokuThatha kwiNcwadi evulekileyo
ipilisi elungileyo yokulahleka kobunzima
malunga no-alex (2014)
Jonga simahla kwi-Intanethi ngaphandle kwentlawulo
oosiyazi: iintsomi zearcadia
Mandy moore ryan adams 2015